Sidee Looga Saaraa Wareegyada Madoow Ee Ragga - Talooyinka Hooyooyinka Maanta | Ragga Stylish
Sidee looga saaraa wareegyada madow ee ragga
Waxaan ognahay in dunida is qurxinta sanadihii ugu dambeeyay kacaan laga sameeyay iyo ragga ayaa kaqeyb qaatay isticmaalkiisa. Maaha in adduunyada la isku qurxiyo ay tahay inay dib u soo celiyaan wax soo saarkooda laakiin taasi waxay u baahan yihiin dad iyaga dalbada. Waa xaqiiqda in rag badan iyo in ka badanba ay rabaan inay wanaag dareemaan, iyo in in badan oo ka mid ah daryeelkooda ay doonayaan waxyaabaha soo saara si ay ragga uga saaraan wareegyada madow.
Badanaa wareegyada madow ee ragga waxay u muuqdaan kuwo aan fiicnayn sida dumarka. Helitaanka sababta ay u soo baxaan waa ujeeddada ugu weyn ee looga hortagayo inay mar kale soo baxaan, laakiin haddii ay tahay wax hidde ah oo aan wax laga qaban karin, marwalba waan awoodnaa dhex gasho kareemada ay suuqu na siiso ama tilmaamo iyo tabaha yar in aan hoos ku muujino.
1 Maxay wareegyada madow ugu muuqdaan ragga?
2 Daawooyinka guriga si looga saaro wareegga madow ee ragga
2.1 Diyaarso shaah ama chamomile.
2.2 Qolofyo lagu qooyay caano qabow
2.4 Xirashada qurxinta
Maxay wareegyada madow ugu muuqdaan ragga?
Sida dumarka oo kale, falcelinta noocan ah waxay sababi kartaa dhowr arrimood. Nin wuu noqon karaa culeys badan awgeed shaqada, waxbarashada ama nolosha bulshada. Waxaa laga yaabaa inay tahay wax daqiiqad ah ama laga yaabo inay milixdu ku badan tahay cuntadaada ama jirkaaga uusan u oggolaanayn wax xad-dhaaf ah sida aalkolada ama tubaakada.
Cunto aan dheellitirnayn, dhibaatooyinka wareega ee haynta dareeraha ama qaadashada daawooyinka waa sababo kale.
In yar seexo Waxay noqon kartaa cunsur kale oo sababi kara sameynta wareegyo madow, maaddaama ay calaamad u tahay daal iyo hurdo la’aan, laakiin sababo kale awgood, xitaa ka dib markaad si fiican u seexatay, waxaad ku soo tooseysaa barar weyn indhaha hoostooda.
Genetics sidoo kale waa cawaaqib kale oo muuqaalkeeda ah, sida gabowga. Sanadihii la soo dhaafay, maqaarka indhaha hoostiisa ayaa qaata oo waxaan lumineynaa dufanka iyo kolajka.
In kasta oo aan dooneyno inaan faahfaahinno noocan oo kale ah ifafaale intaa ka sii badan, waan tilmaami karnaa taas cortisol la'aanta jirka (hoormoonka farxadda) ma keeno xididdada dhiigga ee indhaha hoostooda inay si qumman u kala baxaan, iyagoo muujinaya wanaaggaas.
Lakabka khafiifka ah ee daboolaya aagga isha ayaa aad u khafiifsan oo jilicsan, sidaa darteed waa mid hufan oo kuu oggolaaneysa inaad si cad u aragto inay wax qaldan yihiin.
Daawooyinka guriga si looga saaro wareegga madow ee ragga
Waxaad bilaabi kartaa adeegsiga daawooyinka dabiiciga si aad u joojiso muuqaalkeeda:
Diyaarso shaah ama chamomile.
Waxaad ka faa'iideysan kartaa kiishashka ku-shubidda macaan ee ka dhig qabow indhahaaga korkiisa, ilaa 15 daqiiqo.
Faleebadaani waxay leeyihiin sifooyinka ka-hortagga bararka sida chamomile. Shaaha, oo ay ugu mahadcelinayaan kafeyntiisa, ayaa ka caawinaya maqaarka u yeer, kor u qaad wareegga oo dib u soo noolee.
Qolofyo lagu qooyay caano qabow
Guntimaha dushiisa saar indhahaaga 25 daqiiqo maalin kasta. Guryaha uu leeyahay hoos u dhig haynta dareeraha iyo yaraynta midabka madow ee aagga.
Ku duub barafka barafka maro khafiif ah iskana tirtir agagaarka isha 20 ilaa 25 daqiiqo. Qabowgeeda ayaa yareyn doona haynta dareeraha oo xadeysa xididdada, sidaas ayaa kaa sii deynaysa boorsooyinka farxadda leh.
Adoo isticmaalaya saliid yicib macaan waa daawo kale oo wanaagsan. Waxay kakoobantahay fitamiin E waxayna leedahay awood weyn oo anti-bararka. Ku mari dhawr dhibic qaybta ay dhibaatadu ka soo gaadhay ka hor intaadan seexan maalin kasta, taabasho yar oo aan xoqin, waxaad ogaan doontaa natiijooyinkeeda subaxa dambe.
Daaweyn kale oo wax ku ool ah ayaa ah adeegsiga qaaddo qabow indhaha. Dhig dusha isha indhaha una daa qabowgu inuu wax ku dhaqmo dhowr ilbiriqsi.
Casharradan yar Waxaan ku siineynaa tilmaamaha si aad u ogaato sida saxda ah ee loo isticmaalo qurxinta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto talobixin deg deg ah, waxaan kugula talin karnaa:
Maqaarka caddaaladda- Isticmaal qarsoon khafiif ah, midab ama casaan cirro leh.
Maqaarka madow: isticmaal kareem leh midab waxyar ka fudud maqaarkaaga oo leh midab liin ama jaalle yar.
Isticmaal qarinta adoo siinaya taabashada yar ee wareegyada mugdiga ah oo si tartiib ah ugu faafi maqaarka. Dhamee kordhintiisa illaa aad ka ogaato inay si fiican tahay.
Haddii aad jeceshahay inaad kaqeybqaadato wax soo saarka suuqa, waxaad dooran kartaa inbadan oo iyaga kamid ah oo u gaar ah ragga, isticmaalkeeda saxda ah waxay ka dhigi doontaa natiijooyinka weyn mid muuqda.
Waa inaad noqotaa mid joogto ah in alaabadani ay si wax ku ool ah u shaqeeyaan laakiin iyagu gebi ahaanba mucjiso ma ahaWaxay had iyo jeer noqon doontaa mid waxtar badan in la daryeelo caafimaadka jirkaaga si kiriimyadani ay kuu caawiyaan oo aad u dhaqan geliso maalin kasta.
Waxaan haynaa noocyo sida BaeBody, jel hodan ku ah hyaluronic acid iyo fitamiin E soosaarayaasha oo ka caawiya ciribtirka cagaha tuke, wareegyada madow iyo khadadka ganaaxa
Jel kale ayaa ah Biotherm Homme Total Recharge, kareemkaan wuxuu yareeyaa wareegyada madow wuxuuna caawiyaa ladagaalanka calaamadaha ugu horeeya ee gabowga.
Clarins ragga Waa jel kale oo aad u fiican oo loogu talagalay wareegyada mugdiga ah iyo la-dagaallanka wareegga indhaha, oo leh natiijooyin wanaagsan isla markiiba.
Kariim kale oo awood badan waa Grown Alchemist, oo ah qaacido caan ah oo kaa caawinaysa inaad qoyso maqaarka isla markaana aad la dagaallanto bacaha iyo cagaha tukaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee looga saaraa wareegyada madow ee ragga
Faa'iidooyinka baaskiil wadista